I-Apple sele inesisombululo se-safari bug kodwa kuya kufuneka silinde uhlaziyo lwe-macOS | ndisuka kuMac
I-Apple sele inaso isisombululo se-safari bug kodwa kuya kufuneka silinde uhlaziyo lwe-macOS
Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo umngcipheko eSafari uye wavela evumele nayiphi na iwebhusayithi ukuba ilandelele umsebenzi we-Intanethi yesikhangeli kwaye ikwazi ukumisela isazisi somsebenzisi. Ngethamsanqa, enye yezinto ezibonisa i-Apple kukuba iyasebenza kakhulu ekulungiseni olu hlobo lokuba sesichengeni. Sele sinaso isisombululo, nangona kunjalo kubonakala ngathi Ayizufumaneka kuye wonke umntu de kukhutshwe uhlaziyo olutsha.
I-IndexedDB sisikhangeli se-API esisetyenziswa zizikhangeli zewebhu ezinkulu njengogcino lwecala lomxhasi, oluqulethe idatha efana nedathabheyi. Ngokuqhelekileyo, ukusetyenziswa "komgaqo-nkqubo wemvelaphi efanayo" iyakunciphisa ukuba yeyiphi idatha iwebhusayithi nganye enokufikelela kuyo kwaye ngokuqhelekileyo yenza ukuba isayithi ikwazi ukufikelela kuphela kwidatha eyenziweyo, kungekhona eyezinye iisayithi.
Kwimeko ye-Safari 15 ye-macOS, i-IndexedDB ifunyenwe iphula umgaqo-nkqubo wemvelaphi efanayo. Abaphandi bathi ngalo lonke ixesha iwebhusayithi inxibelelana nedatha yabo, idatabase entsha engenanto yenziwe ngegama elifanayo "kuzo zonke ezinye izakhelo ezisebenzayo, iithebhu, kunye neefestile ngaphakathi kwiseshini yomkhangeli zincwadi ofanayo."
Ngokwe- IWebKit izinikele kwiGitHub, kwaye njengoko ichongiwe yiMacRumors ephakathi. Nangona kunjalo, ukulungiswa akuyi kufumaneka kubasebenzisi de iApple ikhuphe uhlaziyo lweSafari kwiMacOS Monterey, iOS 15, kunye ne-iPadOS 15.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple sele inaso isisombululo se-safari bug kodwa kuya kufuneka silinde uhlaziyo lwe-macOS